शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ हेयरड्रेसिङ सिजर र कम्ब्स सेटहरू: कातर र कपाल कम्ब्स - जापान कैंची
यदि तपाईं उत्तम हेयरड्रेसिङ कैंची र कम्बो सेटहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सही ठाउँमा आउनुभएको छ।
यो ब्लग पोष्टले कपाल काट्ने क्रममा कपाल कम्बो किन चाहिन्छ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर छलफल गर्नेछ। हामी तपाइँको आवश्यकताहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो सेट छनोट गर्न को लागी सुझावहरु प्रदान गर्नेछौं।
प्रत्येक हेयरड्रेसिङ कैंची र कम्बो सेट पेशेवर कपाल काट्ने शियर र एन्टि-स्टेटिक कपाल कंघीको साथ आउँछ।
यो संयोजन सिजर ओभर कम्ब कपाल काट्ने प्रविधिको लागि उपयुक्त छ।
हतारमा? यहाँ शीर्ष दस हेयरड्रेसिङ कैंची र एन्टि-स्टेटिक हेयर कम्ब सेटहरू सारांशित छन्!
Mina टाइमलेस सेट
काटन + पातलो
Ichiro गुलाब सुन कैंची सेट
गुलाब सुनको कोटिंग
#1 प्रो सेट
Juntetsu अफसेट कैंची सेट
अर्गोनोमिक अफसेट डिजाइन
एन्टि-स्टेटिक हेयर कम्ब
Ichiro म्याट कालो कैंची सेट
सुरुचिपूर्ण म्याट कालो
Joewell सी श्रृंखला कैंची सेट
प्रिमियम जापान स्टील
कपाल कैंची कंघी
स्लाइस काट्ने कतरनी
Ichiro आराम कैंची सेट
Ichiro पेस्टल गुलाबी
पेस्टल गुलाबी कोटिंग
Ichiro ड्र्यागन शियर सेट
अद्वितीय ह्यान्डल डिजाइन
Ichiro गुलाब लेफ्टी कैंची सेट
बायाँ हातको ह्यान्डल
Juntetsu रात कपाल कैंची किट
आउनुहोस् हाम फालौं र पेशेवर कपाल कम्ब्सको साथ के उत्तम कपाल कैंची सेट गर्दछ जुन पेशेवर हेयरस्टाइल र बार्बरिंगको लागि उपयुक्त छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्!
हेयरस्टाइलिस्ट र नाईका लागि उत्तम कपाल कम्बा के हो?
जब तपाइँ हेयरड्रेसिङ कैंची र कंघी सेटहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, यो एक सेट फेला पार्न आवश्यक छ जसमा उत्तम हेयरड्रेसिङ कंघी समावेश छ।
स्ट्याटिक बिल्ड-अप कम गर्न मद्दतको लागि कपालको कपालमा कार्बन फाइबर एडिटिभ हुनुपर्छ, र यसले तपाईंको कपालको कैंचीलाई सुस्त हुनबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ।
राम्रो नतिजाको लागि तपाईको कपालको कपालमा राम्रो पकड र चिल्लो, गोलाकार दाँत पनि हुनुपर्छ।
उत्कृष्ट मूल्य सेट र किटहरूमा सजिलो हेयरड्रेसिङको लागि प्रिमियम गुणस्तर कपाल कम्ब्स समावेश छ! एन्टि-स्टेटिक कपाल कम्ब्सहरू छुट्टै वा हेयरड्रेसिङ कैंची र कंघी सेटको भागको रूपमा किन्न सकिन्छ।
समान लेख र संग्रहहरू
स्टाइलिङको लागि कपाल कम्ब्सको लागि उत्तम गाइड
सैलुनका लागि उत्तम १० टुक्रा कपाल कैंची कम्बो सेट
पेशेवरहरूको लागि उत्तम हेयरड्रेसिङ कैंची सेट
पेशेवरहरूको लागि कपाल काट्ने कैंची
कम्ब्सको साथ प्रयोग गर्नको लागि उत्तम कपाल काट्ने कैंची के हो?
जब तपाईं कपाल कम्बो र कैंची सेट किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ, यो कामको लागि राम्रोसँग उपयुक्त हेयरड्रेसर कैंची फेला पार्न महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंको सेटमा कपाल काट्ने कैंची तीखो हुनुपर्छ र राम्रो पकड हुनुपर्छ। तिनीहरू कपाल र बार्बरिंगको लागि पनि डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ ताकि तपाईंले न्यूनतम प्रयासमा उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
कपाल काट्ने प्रविधिले कम्बो र कैंची प्रयोग गर्छ:
सिजर ओभर कम्ब (SOC): एक प्रविधि जहाँ कपाल वा नाईले कैंचीको एक जोडी र कपाल काट्ने कंघी प्रयोग गर्दछ। यो विभिन्न लुक्स र शैलीहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै स्तरित हेयरकट वा बनावट शैली।
कंघी: एउटा स्टाइल जहाँ कपाललाई एक छेउमा जोडिएको हुन्छ। यो उत्पादनको साथ वा बिना गर्न सकिन्छ, र यो भोल्युम र बनावट सिर्जना गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो।
हेयरड्रेसर वा नाईले अन्य धेरै प्रविधिहरूमा कपाल काट्ने कैंची र हेयरड्रेसिङ कंघी प्रयोग गर्दछ, त्यसैले कपाल काट्ने कैंची र कम्ब्सको राम्रो सेट हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
हेयरड्रेसर, नाई, र कपाल काट्ने विद्यार्थीहरूको लागि कपाल काट्ने कैंची र कम्बा प्रविधिहरू छन्।
किन तपाईंले हेयरड्रेसिङ कैंची र कम्बो सेट किन्नु पर्छ?
कपाल काट्ने कैंची सटीक काट्नका लागि उपयुक्त छ, जबकि कपालको कंघीले अतिरिक्त कपाल हटाउन मद्दत गर्दछ र कपाललाई सफा र सफा राख्छ।
कपालमा कंघी बिना कपाल काट्ने कैंची प्रयोग गर्दा असमान कट लम्बाइ निम्त्याउन सक्छ, जसले तपाईंको कपाल काट्ने र गडबड देखिन्छ।
वैकल्पिक रूपमा, तपाईं कपाल काट्दा कंघीको सट्टा आफ्नो औंलाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो राम्रोसँग काम गर्दछ, तर यो एक सटीक कट प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, र कपाल वा नाई को औंलाहरु कपाल कैंची को बाटो मा प्राप्त हुन सक्छ।
कपाल काट्ने कैंची र कम्बा सेट कपाल, नाई, कपाल काट्ने विद्यार्थी, कपाल काट्ने प्रशिक्षुहरू, र कपाल काट्ने विद्यालयहरूको लागि आवश्यक छ।
शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ हेयरड्रेसिङ कैंची र कम्बो सेट
कपाल काट्ने कैंची र कम्बा सेटहरू विभिन्न शैलीहरू, रंगहरू, र सामग्रीहरूमा तपाईंको आवश्यकताहरू अनुरूप उपलब्ध छन्।
हेयरड्रेसर कैंची र कम्बो सेट कपाल कैंची, कपाल कम्ब्स, र एक सुरक्षात्मक कैंची केस संग आउँछ।
#१। सबैभन्दा लोकप्रिय: टाइमलेस कैंची र कम्ब्स कपाल काट्ने सेट
परिचय गर्दै Mina टाइमलेस हेयरड्रेसिङ कैंची र कम्ब्स सेट - पेशेवर र शौकिया कपाल स्टाइलिस्टहरूका लागि उपयुक्त।
हाम्रो उच्च-गुणस्तरको कैंचीहरू स्टेनलेस स्टील र धारदार कटिङ एजले बनेका छन्, जसले तिनीहरूलाई सफा, सटीक कट प्राप्त गर्न चाहने जो कोहीको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
हात (थम्ब्सस्क्रू) टेन्सन समायोजकले सजिलो र मौन काटन गतिहरूको लागि अनुमति दिन्छ, जबकि हाम्रो पातलो कातरहरूमा v-आकारको दाँतले चिल्लो, बनावटी गति प्रदान गर्दछ।
यो सेट समावेश:
दुई एन्टि-स्टेटिक हेयरड्रेसिङ कम्ब्स
कपाल पातलो कैंची
सुरक्षात्मक कैंची केस
कैंची मर्मत किट
साथै, हाम्रो सेट तपाईको स्टाइललाई उत्कृष्ट देखाउन मद्दत गर्न दुईवटा कपाल कम्ब्सको साथ पूरा हुन्छ। आफ्नो अर्डर गर्नुहोस् Mina कालातीत कपाल काट्ने कैंची र कम्ब्स आज सेट गर्नुहोस्!
यहाँ ब्राउज गर्नुहोस्
#२। सबैभन्दा स्टाइलिश: Ichiro गुलाब सुन कैंची र कंघी सेट
शीर्ष गुणस्तर हेयरड्रेसिङ कैंची र कंघी सेट खोज्दै हुनुहुन्छ? भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस् Ichiro गुलाब सुनको कपाल काट्ने कैंची र कम्बो सेट!
यी सटीक-निर्मित कैंचीहरू उच्च-गुणस्तरको स्टेनलेस स्टीलबाट सरल अफसेट डिजाइनको साथ हस्तशिल्प बनाइन्छ, तिनीहरूलाई व्यावसायिक प्रयोगको लागि उत्तम बनाउँछ।
साथै, तिनीहरू हल्का र राम्रोसँग सन्तुलित छन्, उत्कृष्ट उत्तल किनारहरू भएका छन् जसले तीखो, सटीक कटौतीहरू सुनिश्चित गर्दछ।
यस सेटको कपाल पातलो गर्ने कैंचीमा 20%-25% को मानक पातलो दर पनि छ, जसले तिनीहरूलाई भिजेको कपाल स्टाइलको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
तिनीहरूको दाँतमा राम्रा खाँचोहरू पनि हुन्छन् जसले गर्दा चिल्लो, पातलो पनि हुन्छ।
कंघी उत्कृष्ट लोच र एन्टि-स्टेटिक डिजाइनको साथ विशेष प्लास्टिकबाट बनेको छ, यो सुनिश्चित गर्दै कि यो भिजेको र सुख्खा कपालमा सजिलै ग्लाइड हुन्छ!
एन्टि-स्टेटिक हेयरड्रेसिङ कंघी
गुलाबी गुलाब सुनको एलर्जी-तटस्थ रंग कोटिंग
बोनस: स्टाइलिङ र टेक्स्चराइजिङ रेजर
#३। व्यावसायिक छनोट: Juntetsu अफसेट कैंची र कम्बो सेट
सटीक कपाल काट्ने, पातलो र कम्बिंग खोज्दै हुनुहुन्छ? Juntetsu अफसेट कपाल काट्ने, पातलो र कम्बो सेट भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्।
कडा बनाइएको VG10 स्टिलले उत्कृष्ट किनाराहरू भएको उच्च धारिलो उत्तल ब्लेड बनाउँछ, व्यावसायिक परिणामहरूको लागि उपयुक्त।
३० वटा पातलो हुने दाँतको साथ, जुन्टेत्सु कपाल पातलो गर्ने कैंचीहरू चिल्लो, सटीक पातलो गतिको लागि उपयुक्त छन्।
र अन्तमा, विशेष प्लास्टिकको कंघी एन्टि-स्टेटिक र लोचदार छ - यसलाई भिजेको वा सुख्खा कपाल स्टाइल गर्नको लागि उत्तम बनाउँछ।
त्यसोभए किन पर्खने? आफ्नो Juntetsu कपाल काट्ने कैंची र कंघी सेट आजै अर्डर गर्नुहोस्!
एन्टि-स्टेटिक हेयरड्रेसिङ कम्ब्स
प्रीमियम स्टेनलेस स्टील
#४। सुरुचिपूर्ण डिजाइन: Ichiro म्याट कालो कैंची र कम्बो सेट
उच्च गुणस्तरको कपाल काट्ने सेट खोज्दै हुनुहुन्छ जसले तपाइँको स्टाइल सत्रहरू पहिले भन्दा सजिलो बनाउँदछ? भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस् Ichiro म्याट कालो हेयरड्रेसिङ कैंची र कम्बो सेट!
440C स्टिलले बनेको, यी कैंचीहरू हल्का तौल र पूर्ण सन्तुलित छन्, तपाईंले काट्दा दबाब र तनाव लिनुहुन्छ। तिनीहरूसँग चिकनी, सहज कटौतीको लागि उत्कृष्ट किनारहरू पनि छन्।
पातलो हुने कैंचीको 20%-25% को मानक पातलो दर हुन्छ, जसले तिनीहरूलाई भिजेको कपालको लागि उपयुक्त बनाउँछ। तिनीहरूले दाँतमा पातलो पातलो सुनिश्चित गर्नको लागि राम्रो खाँचो पनि प्रयोग गर्छन्।
कंघी उत्कृष्ट लोच र एक विरोधी स्थिर डिजाइन संग विशेष प्लास्टिक बनेको छ, भिजेको र सुख्खा कपाल को माध्यम बाट पूर्ण रूपमा ग्लाइडिंग।
अर्डर गर्नुहोस् तपाईंको Ichiro म्याट कालो कैंची र कम्बो आज सेट गर्नुहोस्!
म्याट कालो एलर्जी-तटस्थ रंग कोटिंग
#५। प्रिमियम शैली र डिजाइन: Joewell कलर सी हेयर सिजर र कम्ब किट
यदि तपाइँ कैंचीको ठूलो जोडी खोज्दै हुनुहुन्छ जसले तपाइँलाई उत्तम कपाल काट्न मद्दत गर्दछ, यो भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्। Joewell C श्रृंखला रङ उत्कृष्टता कैंची।
यी कैंचीहरू तिनीहरूको नाटकीय रंगहरू र सर्वोच्च स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु निर्माणको साथ टिक्नको लागि बनाइएका छन्।
आरामदायी अर्ध अफसेट ह्यान्डल र उत्तल आकार ब्लेडले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ, जबकि साथमा Joewell एन्टि-स्टेटिक हेयर कम्बले तपाईंको कपाललाई राम्रो देखिन राख्न मद्दत गर्दछ।
यो Joewell कलर सी सीरीज शियरहरू उपलब्ध छन् गुलाबी, रातो, सेतो र निलो!
#६। उत्कृष्ट प्रशिक्षु: Ichiro आराम हेयरड्रेसिङ कैंची र कंघी सेट
चाहे तपाईं एक शुरुआत वा एक पेशेवर हुनुहुन्छ, Ichiro रिलेक्स हेयरड्रेसिङ सिजर र कम्ब सेट दैनिक स्टाइलको लागि उपयुक्त छ।
हल्का तौल र राम्रोसँग सन्तुलित डिजाइनले आरामदायी पकड प्रदान गर्दछ र सटीक कटौतीहरू प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँछ।
कन्भेक्स एज ब्लेडले हरेक पटक तीखो नतिजाहरू सुनिश्चित गर्दछ, जबकि एन्टि-स्टेटिक कम्बाले भिजेको र सुख्खा कपालमा सजिलैसँग सर्छ।
#7। फैशनेबल: Ichiro पेस्टल गुलाबी कैंची र कम्बो सेट
Ichiro गुणस्तर र मूल्यमा उत्तम माग गर्नेहरूका लागि उत्तम कैंची प्रदान गर्दछ।
टिकाउ, जंग प्रतिरोधी कटिङ एज र आकर्षक पेस्टल गुलाबी रङको कोटिंगको साथ, यी कैंचीहरू कार्यात्मक रूपमा सुन्दर छन्।
हल्का तौल र आरामदायी प्रयोगको लागि अफसेट, तिनीहरू तपाईंको हात वा नाडीलाई तनाव नगरी कपाल काट्ने घण्टाको लागि उपयुक्त छन्।
शैली, व्यावसायिक गुणस्तर, र कारीगर ब्लेडस्मिथ डिजाइनको मिश्रणले यी पेस्टल गुलाबी कपाल कपाल कपाल र स्टाइलिस्टहरूको लागि राम्रो प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ!
कम्बो विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको प्लास्टिकबाट उत्कृष्ट लोचदारता र एन्टि-स्टेटिक सुविधाहरूको साथ बनाइएको हो जसले यसलाई कपाल-स्टाइलिङका सबै आवश्यकताहरूका लागि उपयुक्त बनाउँदछ किनभने यो सुख्खा र भिजेको कपालबाट सहजै सर्छ।
#8। अद्वितीय डिजाइन: Ichiro ड्र्यागन कातर र कम्बो किट
यो Ichiro गोल्ड ड्रैगन हेयरड्रेसिङ सिजर सेट पेशेवर स्टाइलिस्टहरूको लागि उत्तम टूलकिट हो।
उच्च गुणस्तरको स्टिल निर्माणले हल्का तौल र एर्गोनोमिक अनुभूति दिन्छ, जबकि सुनको अफसेट डिजाइनले तपाईंलाई बलियो पकड र थप आरामदायी काटन स्थिति दिन्छ।
कटिङ सिजरमा रहेको परिशुद्ध-ग्राउन्ड कन्भेक्स एज ब्लेडले सफा, सटीक कट सुनिश्चित गर्दछ, जबकि थिनिङ्ग सिजरमा राम्रो V-दाँत सेरेसनहरूले सहज, सटीक फिनिश प्रदान गर्दछ।
साथै, उत्कृष्ट लोच र एन्टि-स्टेटिक डिजाइनको साथ विशेष प्लास्टिकको कंघी सामान्य हेयरस्टाइलको लागि उपयुक्त छ।
#९। बाया हाते: Ichiro गुलाब बायाँ कैंची र कंघी सेट
यो Ichiro लेफ्टी रोज हेयर कटिङ सिजर एण्ड कम्ब किट बायाँ हाते पेशेवरलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको थियो।
कैंचीहरू कुशलतापूर्वक ह्यान्डलहरूमा सुन्दर नक्काशीका साथ बनाइएका छन् र हल्का तौल र पूर्ण सन्तुलित छन्, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो र सहज बनाउँदै।
पातलो हुने कैंचीको 20%-25% को नियमित पातलो दर हुन्छ, भिजेको कपालको लागि उपयुक्त छ, र चिल्लो, निर्दोष परिणामहरू सुनिश्चित गर्न दाँतमा राम्रो खाँचो प्रयोग गर्नुहोस्।
कंघी उत्कृष्ट लोच र एक विरोधी स्थिर डिजाइन संग विशेष प्लास्टिक बनेको छ, सामान्य हेयरस्टाइल को लागी उपयुक्त।
#१०। स्टाइलिश कालो: Juntetsu रात कैंची र कम्बो सेट
तपाइँका सबै स्टाइलिश कपाल काट्ने आवश्यकताहरूको लागि उत्तम सेट प्रस्तुत गर्दै! यी प्रिमियम स्टील कैंचीहरूले अविश्वसनीय रूपमा तीखो, टिकाउ ब्लेड सिर्जना गर्दछ जुन तपाइँले चाहेको कुनै पनि शैली प्राप्त गर्नको लागि उपयुक्त छ।
Juntetsu Night Hairdressing Scissor & Comb Set - एउटा प्रिमियम स्टिलको सेट हो जसमा सबभन्दा तीखो र सबैभन्दा टिकाउ कन्भेक्स एज ब्लेड, कडा VG10 स्टिल र 30 वटा पातलो दाँतहरू छन्।
कंघी उत्कृष्ट लोच र एक विरोधी स्थिर डिजाइन संग विशेष प्लास्टिक बनेको छ।
कपाल काट्दा कपाल कंघी कसरी प्रयोग गर्ने
अब जब तपाइँसँग सही कपाल कङवा छ, यो कसरी राम्रोसँग प्रयोग गर्ने सिक्ने समय हो!
जब तपाइँ कपाल काट्दै हुनुहुन्छ, सधैं कपाल बढेको दिशामा कंघी गरेर सुरु गर्नुहोस्। यसले कुनै पनि ट्याङ्गल्स वा गाँठहरू हटाउन र काट्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्नेछ।
त्यसपछि, आफ्नो हेयरड्रेसिङ कैंची लिनुहोस् र 45-डिग्री कोणमा कपाल काट्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ कपालको कपालको समानान्तर काट्दै हुनुहुन्छ र लम्बवत छैन।
यदि तपाइँ तपाइँको कपालको कपाल को लागी लम्बवत काट्नुभयो भने, तपाइँ चप्पी कपाल काट्न सक्नुहुन्छ।
हेयरड्रेसरहरू र नाईहरूका लागि, यी चरणहरू पछ्याउन पनि महत्त्वपूर्ण छ:
कपालमा भएको कुनै पनि ट्याङ्गल वा गाँठोलाई कंघीले हटाएर सुरु गर्नुहोस्।
45-डिग्री कोणमा कपाल काट्नुहोस्, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ कपालको कपालको समानान्तर काट्दै हुनुहुन्छ।
कपाल काट्ने कैंचीलाई आफ्नो काममा समात्नुहोस्minant हात, र कपाल कपाल कंघी समात्न आफ्नो अर्को हात प्रयोग गर्नुहोस्। यसले कपाललाई सफा र सफा राख्न मद्दत गर्नेछ।
कपाल काट्दा जहिले पनि हेयरड्रेसिङ कैंची प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि यी कपाल र नाईका लागि डिजाइन गरिएको हो।
आफ्नो कपाल कैंचीले आफैलाई काट्न सावधान हुनुहोस्!
कपालमा कपाल काट्ने कैंची एक प्रविधि हो जहाँ कपाल वा नाईले कपाल काट्न कपाल काट्ने कैंची र कपाल काट्ने कपाल प्रयोग गर्दछ।
कम्बो ओभर एउटा स्टाइल हो जहाँ कपाललाई एक छेउमा जोडिन्छ।
हेयरड्रेसर वा नाईले कपाल काट्ने कैंची र कम्ब्सको साथ धेरै अन्य प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्छ।
उत्तम कपाल काट्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको हेयरड्रेसिङ कैंची र हेयरड्रेसिङ कम्बो सेट प्रयोग गर्नु हो।
निष्कर्ष: तपाईंले किन हेयरड्रेसिङ कैंची र कंघी सेटहरू किन्नु पर्छ?
यदि तपाइँ गुणस्तरीय हेयरड्रेसिङ कैंची र कम्बो सेट खोज्दै हुनुहुन्छ भने, अनलाइन किन्नको लागि धेरै उत्कृष्ट विकल्पहरू उपलब्ध छन्।
प्रत्येक सेट एक पेशेवर विरोधी स्थिर कपाल कंघी र कपाल को लागी एक पेशेवर कपाल काटन कतरनी संग आउँछ, यो आदर्श कपाल प्राप्त गर्न चाहने जो कोही को लागी उपयुक्त बनाउँछ।
उत्तम मूल्य हेयरड्रेसिङ कैंची र कंघी सेटहरू अनलाइन किन्नको लागि उपलब्ध छन्, त्यसैले आज नवीनतम सम्झौताहरू जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्!
के कपाल कैंचीमा पेंच छ? जवाफले तपाईलाई छक्क पर्न सक्छ!
जनवरी 27, 20223मिनेट पढ्ने